Ndiyo kereke yevatadzi, iyo inogadzirwa mumufananidzo - chiKristu chenhema.
Two zvitsauko yose chose Zvakazarurwa kuti rondedzero hure guru. Nokudaro kunzwisisa kuti pane chinokosha chakajairika, icho kurapwa muzvitsauko izvi.
Harald Gustafsson aiva zita mhuri uye akanga ari mufundisi Pentecostal vomuSimina Church mu Gothenburg muna 1945 - 1967. Iye zvakanyorwa rinonzi Mashoko kubva Zvakazarurwa. Imwe bhuku racho chitsauko, rakanzi The Great nechifeve.
Guru pfambi Up. 17 uye 18
The munhu zvichienderana maitiro kuti tinosangana muna Zvakazarurwa, raiva nomugero kwenguva yakareba. Ndizvo chete nechikara - wechihedheni nehurumende simba, uye ndizvo zvakaita mwenga - the Church - uye pamwechete mhombwe huru. Unofanira kuona navo kwavo munhoroondo chechinyorwa. Nhoroondo nemaonero zvakakodzera, kana tichida kunzwisisa vatorwa mifananidzo Revelation vake. Two zvitsauko yose chose Zvakazarurwa kuti rondedzero hure guru. Nokudaro kunzwisisa kuti pane chinokosha chakajairika, icho kurapwa muzvitsauko izvi.
Ndiani mhombwe huru?
Ndiyo kereke yevatadzi, iyo inogadzirwa mumufananidzo - chiKristu chenhema. mufananidzo uyu rinowanzoshandiswa muBhaibheri, ipapo upombwe Mwari achaita kungaenzanisirwa. The Old Testament vaIsraeri vasina kutendeka kuna Mwari vakadanwa skökoväsen revaporofita. Zvino New Testament Church kutendeka kuna Ishe, anova pfambi mumaziso ake.
Moderskökan haagoni kuva munhu mumwe kupfuura Roman Catholic kwebasa raPapa. chechi iyi ndiyo amai mumwe skökokyrkor panyika.
The guru Hure nomwenga Assembly vari nemumwe zvakapesana vakakwana. An Chirungu munyori anenge zvakakodzera akanongedza acho. Mumwe anomiririra kuchena pachayo; mumwe saka kuchena, kuti tsika rinoodza anogona kuita naye. Chimwe Gwayana chicks; umwe chokuita madzimambo paNyika vakaipa. Mumwe akapfeka kwakajeka chena yekururama; achinyepera yechipiri yokukudzwa yepasi nezvishava, nezvitsvuku uye nendarama. Imwe mhandara vakachena; mumwe amai vemahure enyika. Mumwe vanoraswa uye vachitambudzwa; mumwe akadhakwa neropa revatsvene. The mwenga, tichimbokanganwa norunako kubwinya kudenga; hure inonyangarika murima uye zvipfungaire kubva pfuma nomoto kuti zvinodya naye.
Rakava yeRoma hure chechi yaiva kamwe apostlatidens ungano Bridal. Asi tsvina akapinda uye akaparadza exuberant upenyu mweya. Hwehupirisita akauya pakupedzisira, panzvimbo pakunamata basa uye zvipo zvemweya. Zvino Mambo Constantine akatora yekare yeKatorike pasi weRoma hurumende patronage, atova zvaibva nokuda kwebasa raPapa.
Hure muruoko rwake akanga aine kapu yendarama uzere nezvinonyangadza uye netsvina yeupombwe. Kazhinji zvinonyangadza ndiro zita zvifananidzo muMagwaro. Uye Roman papa kunamata zvidhori akanyatsoratidza vechihedheni, sezvo kuwana. Hazvina chete kunamata zvidhori, zviri kumhura Mwari. Pope vachiti nzvimbo yaMwari. Iye anoti mumiririri waKristu panyika. Leo X - Papa uyo akararama panguva imwe chete Martin Luther - vakagamuchira rukudzo naMwari. Lateran Council akaripa mutero kwaari nemashoko aya: "Isu zvikuru kurumbidza ukuru wako naMwari. Ndiwe murume yechechi, Prince kwevaApostora, zvose Ishe uye mambo. Uri mufudzi uye chiremba. Muri Mwari. "
Mumwe papa, Pius IX, akati nezvake: "Ini ndiri nzira, nechokwadi uye noupenyu"
It zvidhori, aripo muchechi iyi sezvo Maria Kapoka uye kunamata vatsvene, hapana asi wakare wechihedheni mångguderiet, iyo kereke nhaka yechihedheni nyika uye akapa tinge wechiKristu zvishomanana. Mukati kwebasa raPapa Mariya kuribvisa paMwari Baba naJesu Kristu. Mary ndiye murevereri. Hongu, iye ndiMwari.
kunamata Pope Church uye achikudza navatsvene vasingaverengeki riri akakurumbira zvakadaro, zviri pachena kuti kutaura nezvazvo. Skökokyrkans yendarama mukombe uzere nezvinonyangadza.
The madota zvakare ine yeupombwe kusachena. It anokanda tsime chiitiko kwake kusavimbika kuna tenzi wadhi wokutanga uye wake kanganwiro kusvikira munyika huru uye machinda aro. Her pakunamata ufeve hwakanaka.
Asi kwebasa raPapa Panewo imwe rakadzikadzika kuora kwetsika. Vapristi Catholic chave chaizvo zvifeve. Kusaroora kwave kutuka kwavo zvikuru.
Panguva Roman Catholic seminaries, bhuku tsika dzidziso imwe jesuitteolog Alphonsus Maria of Liguori. Bhuku iri rinopa tsanangudzo murayiridzo ose unzenza uye unzenza uye unzenza.
The Norwegian munyori Marta Steinsvik akabudisa bhuku matatu apfuura pamwe musoro Saint Peters Himmelnökler. Ikoko, iye anozivisa papa hunonyadzisa unzenza nenzira akaita kuti vapristi veKaturike zvachose nehasha. Bhuku iri vakawanda chete akatorwa kunyanya Liguoris yetsika yebhaibheri asiwo kubva mumabhuku nemamwe vanyori Catholic '. prices izvi kwainzi nokuda aongororwe sezvo majee, kuti zvikamu zvikuru mubhuku chakafukidzwa neingi.
Kana Catholic mupristi musarudzo pakuwana zivo pamusoro unzenza uye unzenza, sezvo bhuku iyi kwazvo kudzidzisa, vari kuonekwa kugadzirira kwavo basa confessionals Catholic.
zviuru vakadzi vave wotevedzera vapristi confessionals Vangani, zvichida hapana kupfuura Mwari kuvimba. The confessional Catholic kwave mikuru kutuka mutsika kuremekedzwa kupfuura zvichida zvimwe. Avo vanokahadzika kururama mashoko angu anogona kuverenga Bhuku rataurwa nomuromo Marta Steinsvik kana bhuku mupristi, mukadzi uye nokureurura Charles Chiniquy, uyo makore makumi mashanu vaiva Catholic Church uye aiva muprista ikoko.
Mhombwe huru uye chikara
Chikara, sezvo isu akanongedza kwokutanga, yechihedheni mamiriro. In chikara ichi tsvuku akagara nechifeve. Zvinoreva, kutanga, kuti hurumende inotsigira kereke hure. Izvi zvakatanga apo Constantine akakwidziridzwa Church yechiKristu, iyo chitendero mamiriro, uye akauya pasi pehurumende kuti pokugara uye kudzivirirwa. Yakanga dzechechi makuru tsaona. Sezvinobvumwa kupera nokutambudzwa reropa kubva Hurumende, asi kereke vakavawo novimba mamiriro. Izvi yezvinongoerekana chinzvimbo kugoverana zvose hurumende-akatsigira uye kusvika pamwero hurumende dzakaitisa machechi echiKristu the Old Catholic. Gare gare, kwebasa raPapa yakwira kupfuura mamiriro. The kusonganirana mamiriro aiva mumwe nhanho skökoväg ngozi dzechechi.
Asi chifeve agere pamusoro pechikara kunorevawo kuti iye vakatsvaka kutora itsvo kutungamirira mumaoko avo uye kudzora mamiriro simba rake zvinomufadza. In yeRoma kukura, tinoona ichi zvakajeka kwazvo. Kwebasa raPapa akatora zvikuru nokukurumidza kutanga mumaoko enyika. Kwemazana emakore, sezvo machinda uye vatongi vaikwikwidzana kuhwina papa uye papa nyasha uye nyasha. Uye havana kakawanda vachida yechechi zvishandiso kuita mirayiro yake. simba rake rine dzimwe nguva anga kwazvo kuti zvose madzimambo uye madzimambo Zvakarambidzwa, kana vakaramba kuteerera kwaari. Vakawanda madzimambo Ages vakanga korona naPapa. Kwebasa raPapa kuwanwa ose enyika nenzira mukuru simba. Yechechi rezvematongerwe enyika asati rapera. Zvichida simba rayo achava kunyange mukuru pakupera kwenguva, pamberi kwaMwari.
Rimwe zuva, zvisinei, chikara kukandira bhowa mutasvi pachake. Ipapo öclestimma kurohwa.
Mhombwe huru uye dzvene.
Ndinoda kuratidza kuti kana tinotaura yeRoma, ndiwo maitiro tiri kureva, kwete vanhu. Pane uye zvichiri vanotya Mwari vanhu muchechi ino, uyewo imwe chechi yePentekosti kungava vanhu vakaita skökoliv pakunamata. Saka zviri hurongwa yatiri kutaura nezvayo. "Zvino ndakaona mukadzi akadhakwa neropa revatsvene." Kwebasa raPapa Ateura zvakawanda ropa kutenda pane zvose utsinye Roman Emperor pamwe chete. Zvinofungidzirwa kuti kutenda dzinenge mamiriyoni makumi mashanu vakaurayiwa muchechi iyi. Uye papa utsinye maererano navatsvene zhinji kutenda pasi uye kusanganisira utsinye Emperor Nero kuti mumumvuri.
Inkvisationen muMiddle Ages yayo zviridzwa danda raiva rimwe zvikuru diabolical, yakagadzirwa kuti kutambudzwa vamwe. Havana kugutsikana kungova kuuraya dzavo vakatambudzwa. rufu asati asvika sezvo akasunungura, akanga akawanda izvi matsvene achindireverera direst kurwadziswa. Raibvunzurudza mugomba rakanga hautauriki chakashata. Kunyanya inkvisationen Spanish akawana ropa mukurumbira. Inkvisationsdomstolarnas nhengo neMutungamiriri Pope.
The Roman Catholic Church iri pedyo nhasi kana hunonzi kurambwa kana pamutemo chabvisa Raibvunzurudza. Inkvisitionskongregationen nyorganiserades muna 1908 uye ichiri kutanga pakati zvose izvi muungano chechi. The Pope pachake urongwa ichi wevarume. Izvi ndizvo chaizvo pamusoro yechechi maonero avo vanodana vanyengeri.
Hure ndikanwa ropa revatsvene.
The guru chifeve ivo
Vachatongwa zvikurukuru kuva kutevedzerwa ne chikara chete, kare akaenda naye. MuRussia, takaona kuti tsvuku yechiKomonisiti hurumende vakapamba Church Orthodox uye akapotsa yakapwanyika chose naye. Chete wakadzokororwa Papera kuMexico makore mashomanana. Kuburikidza mienzaniso iyi kuti nzwisisei kuti ruchapinda kana vilcldjuret pamwe madzimambo enyika "mhombwe, uye anofanira yaro dongo uye kupfeka, uye vachadya nyama yayo, nekuipisa nemoto" (Zvak 17: 16 b).
Rimwe zuva ari mamiriro zvichaita zuzai zvose yechechi simba, uye pachinzvimbo kutakura kumutakura, zvichava paradza naye.
Zviri achiri chaizvo mutongo waMwari, kuti kunokanganisa hurongwa, inova chisekeso kereke Jesu Kristu uye basa rake panyika. Uye ichi kutonga kwaMwari hure kuchaita kumutsa denga nokufara.
"Fara pamusoro chii chakaitika kwaari, iwe denga, nevaapositori vatsvene nevaporofita, nekuti Mwari akavachengeta pamusoro wake, uye atsive imi" (Zvak 18: 20).
Muna Zvakazarurwa nemasere chitsauko akaita hure uye Bhabhironi Guru zvinofanana pfungwa. Izvi zvakamushamisa vamwe. Ndinofunga ndiro reshiyo sezvo kana mwenga uye Jerusarema Idzva yakagadzirira sezvo zvimwechete. Kuti nzira zvakanaka kuti Jerusarema idzva musha nomwenga chekusingaperi, apo hure anogara muBhabhironi Guru. Ikoko iye akagara akafanana mambokadzi, uye rweBhabheri mweya iye nevakange. Zvadaro, kana Bhabhironi Guru anoenda pasi, ndiyewo chifeve kwakarurama kwaMwari.
Pakupikiswa kwakakwidibira kuratidzwa mhombwe huru rokunyevera chiratidzo ruzha kubva kudenga.
"Ipapo ndakanzwa rimwe inzwi richibva kudenga richiti:
Budai mariri, vanhu vangu, kuti murege kugovana pazvivi zvaro, uye kuti murege kugamuchira zvematambudziko aro. " (Zvak 18: 4).
Buda skökoväsen zvokunamata zvose!
Zvirokwazvo tine pedyo chaizvo nenguva apo kutongwa kereke hure rinofanira kutevedzerwa. Apo tinoziva, kuti nguva kuswedera kuti muchato weGwayana. Ngativei akaramba akatendeka kuna chikomba vedu vokudenga, saka tiri nazvo kusangana naye paanouya!
Ari kuuya! Iva wakagadzirira!
Vecka 19, söndag 16 maj 2021 kl. 16:16